MụtaAngularJSya na ụzọ mgbochi mmụta
Ghota ihe atumatu nke akwukwo ndi otu na otu AngularJS si eme ka mmepe ha
Jiri nlezianya kewaa ihe nlereanya, anya, na njikwa nke ngwa gị ma mejuputa ha site na iji AngularJS
Okwu Nna-ukwu AngularJS, ihe nzacha, na nchapu
Wụpụta ụdị mmụọ
Mee ngwa ngwa ime Ajax na ngwa AngularJS gị
Dee ntuziaka AngularJS
Nnwale nyocha na njedebe site na njedebe na-anwale ngwa ndị AngularJS gị
Ejiri arụmọrụ na 2.0 Angular ma e jiri ya tụnyere Angular 1.x. Bootstrap bụ ugbu a n'elu ikpo okwu kpọmkwem na 2.o. Ya mere, ọ bụrụ na ngwa bụ bootstrap si na ihe nchọgharị ọ ga-akpọ dị iche iche bootstrap dị ka eji tụnyere ngwa mkpanaaka. Ya mere, maka ngwa bootstrap. E nweghị nkwado mkpado na Angular 1.x. A na-eme ka AngularJS 2.0 na-echekwa na ị na-echekwa na ị nwere ike ịmegharị ya.
Mee Ngwaahịa Ngwaahịa Ngwaahịa dịka Ngwa Ngwa Naanị site na iji Angular.Ọmụma aka a ga-ebelata usoro ọmụmụ mmụta maka mmelite nke Angular 4. Ndị ga-enwe ike ịrụ ọrụ na ngwa ndị mmụọ. Ha ga-enwe ike ịmepụta Otu Page Ngwa na iji Angular. Ndị ga - enwe ike ịmepụta koodu site na iji akwụkwọ. Ndị ga - enwe ike ịmekota ngwa UI Angular na ngwa Web.
Na nso Ụlọ Elu Signature
Mbụ nke mbụ, H-159,
Block H, 63 mpaghara,
DN- 14, Ụlọ Vishnu,
5th Floor, Mpaghara -V,
Obodo Salt Lake